🥇 accounting yekushanda kwechikwereti
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 842
Vhidhiyo ye accounting yemabasa echikwereti
Raira kuverenga kwemabasa echikwereti
Zvikwereti zvechikwereti zvinonyorwa otomatiki muUSU Software, zvinoreva kuti chero mutengano wechikwereti uchakurumidza kuratidzwa paaccount uye muzvinyorwa zvese zvine chekuita nezvikwereti, zvinosanganisira color color chiratidzo, icho chinopihwa mune otomatiki accounting account kuti ive nechokwadi chekuona kutonga kweese mashandiro izvo zvinoitika kana uchibhadhara chikwereti. Zvese zviitiko zvinoitwa pasina kutora chikamu kwevashandi, nekudaro kubvumidzwa kwe 'otomatiki accounting', izvo zvinoita kuti iyo chaiyo accounting isangoshanda chete, nekuti kumhanya kwechero oparesheni chidimbu chechipiri, zvisinei nehuwandu hwe data mu kugadzira, asi kungobudirira nekuda kwekuzara kwedhivhidhi dhata kuti inyorwe. Zvakare, ne otomatiki accounting, kuverenga kwese kunoitwawo otomatiki, kusanganisira kuverenga kwekufarira uye kuwedzerwa kwezvirango, kuverengwa kweyekubhadharwa apo zvazvino shanduko yemari yekunze inoshanduka kana zvikwereti zvakapihwa mune imwe nyika mari, uye mashandisiro pazvikwereti zvakadaro inoitwa mukuenzana kwenyika.
Kuverengera kwekushanda kwechikwereti mune mari yekune imwe nyika kunoitwa maererano nemisimboti yakafanana neyezvikwereti zvakajairika, asi, sekutonga, mapato anobvumirana nezvehunhu hwekutengesa kuti vadzokerezve mari kana huwandu hwazvino hwekuchinjana hwemari yekunze uko chikwereti ichi yakapihwa shanduko, kana mari yekune imwe nyika ikachinja zvakanyanya. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kiredhiti mune mari yekune dzimwe nyika, kana iri pfupi-pfupi, inobatsira zvikuru kupfuura chikwereti mumari yenyika sezvo pakushaikwa kwekuchinja kwemutengo wekutsinhana kwemari yekunze, mashandiro pazvikwereti zvakadaro anoda kudzoserwa kwakaderera kupfuura muchiitiko yechikwereti pasi pemamiriro akafanana mumari yemuno. Iko kumisikidzwa kweakaunzi yemabasa echikwereti kunozviparadzanisa zvikwereti 'zvekune dzimwe nyika nemhando, izvo zvinotemerwa nechinangwa chemari yekunze mari, kune vane chikwereti, zvibvumirano, uye vakazvimiririra vanoita ese marudzi emabasa anopihwa kumakiredhi ebasa mune mari yekunze. Basa rayo rinosanganisira kutonga pamusoro pekugoverwa kwakaringana kwemari yechikwereti, kuzadzikiswa kwakakodzera kwezvisungo pavari, uye kutevedzera zvinodiwa nemitemo yekunze yekudyidzana.
Iko kumisikidzwa kweakaunzi yemabasa echikwereti mune imwe mari yekunze inozotarisa otomatiki muyero wekutsinhana pamubhadharo wechikwereti, mutsauko wekutsinhana pamubhadharo wechikwereti chikuru nezuva rekubhadhara, zvinoenderana nehurongwa hwavakatemerwa, irowo inogadzirwa zvakasununguka neyakagadziriswa. Kudzora pamari dzekunze, zvakanyatso, kutarisa kwavo kwazvino mitengo, iyo otomatiki accounting system inoitisa otomatiki uye, kana ikachinja zvakanyanya, pakarepo inoita mashandisirwo ekuverengera mari zvinoenderana newero idzva, ichizivisa vatengi nezve izvi otomatiki neavo vanofambidzana vari yakapihwa mudhatabhesi, kana iyo software yaiswa mubazi rezvemari.
Kuongorora mashandiro emari dzekunze kunoitwa kana uchipa mari yechikwereti, panguva dzekudzorera dzinotevera kana pavanodzoserwa. Kuona zviitiko zvese, zvinonyoreswa mumarejista emagetsi sezvo chirongwa ichi chichigadzirisa zvakanyanya zviwanikwa zvemari, kudhirowa mafomu akasarudzika ayo anonyora zviitiko zvacho, izvo zvakaitwa panguva yekuburitswa zvine ruzivo rwakadzama kune chimwe nechimwe chazvo, kugadzirisa misi, nzvimbo , counterparties, uye huwandu hwevanhu vane basa rekuita.
Kuchengetedza zviwanikwa, zvakakosha kwazvo inguva nemari, ndiro basa rechirongwa, nekudaro, rinorerutsa maitirwo ese sezvinobvira uye, nekudaro, anomhanyisa, achisiya vashandi vaine mutoro mumwe chete - kupinda kwedata, kutanga uye zvazvino. Kuti utore ruzivo rwakagamuchirwa kubva kuvashandisi, kuvimbika kwaro uye kugona, magazini ehunyanzvi emagetsi anopiwa, umo vashandi vanotumira mameseji nezve zviito zvavo zvakaitwa mukuita kwemabasa. Zvichienderana neruzivo urwu, iyo otomatiki system inoverengera zviratidzo zvinoratidza mamiriro azvino maitiro ebasa. Zvichienderana nezviratidziro zvinoratidzirwa, sarudzo dzemanagement dzinoitwa kuti dzirambe dzichishanda nenzira imwechete kana kugadzirisa chero maitiro kana kutsauka kwechiratidzo chaicho kubva pane chakarongwa chakakura zvakakwana. Naizvozvo, basa rekushanda revashandi rakakosha, rinoongororwa nehurongwa hwekuverenga kana uchiverenga zvidimbu zvemubhadharo kune vashandisi pakupera kwenguva yekuzivisa.
Iyo purogiramu pachayo inotara muripo wemwedzi wega wega wevashandi, uchifunga nezve mhando yeruzivo rwunotumirwa mumatanda ebasa, saka vashandi vanofarira kuwedzerwa kwakakodzera kwedata uye kuvimbika kwavo. Kudzora ruzivo rwunouya kubva kuvashandisi kunoitwa nevatariri uye nesisitimu pachayo, kuteedzera aya mabasa, sezvo vaine nzira dzakasiyana dzekuyedza, nekudaro vachizadzikirana. Iwo manejimendi anotarisa matanda evashandi kutevedzera mamiriro azvino ekufamba kwebasa, kwavanoshandisa iro basa rekuongorora, iro rinonyatsoratidza kuti ndeupi ruzivo rwakawedzerwa kuhurongwa kubvira cheki yekupedzisira uye, nokudaro, ichikurumidzira. Iyo yechikwereti mashandiro ekuverenga system inochengetedza kutonga pamusoro pezviratidzo, kusimbisa kuzviisa pasi pakati pavo, izvo zvinosanganisa zvikanganiso.
Iyo accounting account yechikwereti mashandiro inogadzira akati wandei dhatabhesi, kusanganisira chigadzirwa chigadzirwa, mutengi-parutivi CRM, kiredhiti dhatabhesi, gwaro dhatabhesi, mushandisi base, uye dhatabhesi yeanobatana. CRM ine nhoroondo yekudyidzana nemutengi wega wega kubva panguva yekunyoresa, kusanganisira mafoni, misangano, e-mail, zvinyorwa zvetsamba, zvinyorwa, uye mifananidzo. Iyo dhatabhesi dhata ine nhoroondo yezvikwereti, zvinosanganisira zuva rekuburitswa, zviyero, zviyero zvemitero, purogiramu yekubhadhara, kuwedzerwa kwemendenenzi, kuumbwa kwechikwereti, uye kubhadhara chikwereti. Kuverengera kwezvekutengeserana mudhatabhesi rechikwereti hakuzotora nguva yakawanda sezvo chishandiso chimwe nechimwe chine chinzvimbo uye ruvara kwachiri, kuti ugone kutarisisa mamiriro azvino pasina kuvhura magwaro. Iyo sisitimu inonyatso tsigira kuratidza kwemavara ezviratidzo uye mamiriro kuitira kuchengetedza nguva yevashandisi. Ruvara runoratidza mwero wekubudirira kwemhedzisiro yaunoda.
Iyo accounting system yemabasa echikwereti anonyatso tsigira kubatanidzwa kwemafomu emagetsi. Ivo vane imwecheteyo yekuzadza fomati, yakafanana kugovera ruzivo, uye manejimendi ekushandisa. Iyo purogiramu inopa yega dhizaini yemushandisi pabasa pabasa - inopfuura makumi mashanu dhizaini sarudzo yeiyo interface uye inogona kusarudzwa nekutsikisa. Vashandisi vane avo vega marogi uye ekuchengetedza mapassword kwavari, ayo anopa ega mafomu emagetsi ebasa uye huwandu hunodiwa hwemashoko ebasa. Logins inoumba rakasiyana nzvimbo yebasa - wega mutoro nzvimbo, uko rese mushandisi data rakamisikidzwa nekutumira, izvo zviri nyore kana uchitsvaga zvisirizvo mushe. Iyo yakawanda-mushandisi interface inobatsira kugadzirisa dambudziko rekugovana kana vashandisi vachiita panguva imwe chete basa sezvo rwisano yekuchengetedza data ichibviswa. Iyo sisitimu inozvimiririra inogadzira iro rese razvino gwaro kuyerera, kusanganisira zvirevo zvemari, zvinosungirwa kumutongi, pasuru yakazara yemagwaro ekuwana chikwereti.
Chirongwa ichi chinochengetedza zvinyorwa zvinoverengeka pane ese mashandiro ekuita, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuitisa kuronga kunoshanda kwenguva inotevera, kufungidzira zvabuda. Kubva pane kuverenga accounting, mhando dzese dzezviitiko dzinoongororwa, kusanganisira kuongororwa kwekushanda kwevashandi, zviitiko zvevatengi, uye kugadzirwa kwenzvimbo dzekutengesa. Kuongororwa kwemarudzi ese ezviitiko, zvinopihwa nekupera kwega kwega nguva yekuburitsa, zvinoita kuti zvikwanisike kugadzirisa matanho, uye kugadzirisa mashandisirwo emari. Iyo purogiramu inotsigira inoshanda kutaurirana - zvemukati nekunze, mune yekutanga kesi pop-up windows, mune yechipiri zvemagetsi kutaurirana - e-mail, SMS, Viber, uye izwi kufona.